Emelitere ICAO nkwado kwadoro ụlọ ọrụ ụgbọ elu ịmalitegharị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Emelitere ICAO nkwado kwadoro ụlọ ọrụ ụgbọ elu ịmalitegharị
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọ dị oke mkpa na ndị steeti mejuputa ntuziaka a, ọkachasị ka ha na-eme atụmatụ maka mmalite nke ụgbọ elu mba ofesi mgbe mba nwere ike imeghe
Nke a bụ nnukwu ọrụ nke steeti na ndị nwere oke ikuku n’okpuru iduzi ICAO yana nkwado zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ
Otu n'ime ndụmọdụ ndị kachasị mkpa sitere na ọrụ a bụ oku maka ndị ọchịchị mba iji hụ na CART na-ewepụta nsonaazụ na mkpebi mba
89% nke ndị nabatara nyocha IATA kwenyere na gọọmentị ga-ahazi ịgba ọgwụ mgbochi na asambodo nnwale
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) nabata ya Civiltù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu International (ICAO) Nkwado ndị kansụl nyere ndụmọdụ kachasị ọhụrụ sitere na Task Force Recovery Task Force (CART). Ntinye igodo gụnyere:
Nnwere onwe nke nwa oge nke ụgbọ elu ụgbọ elu
N'ịtụle ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ ụgbọ elu
Bawanye nkwado n'etiti gọọmentị iji mejuputa atụmatụ na nduzi CART
Nwelite ma ọ bụ nduzi ọhụrụ maka
COVID-19 njikwa ihe egwu tinyere ịgba ọgwụ mgbochi na mmekọrịta ya
Ntuziaka ndị dị ize ndụ maka ibu nke ụgbọ elu ndị eji eme njem
Usoro ohuru maka ikwuputa mmezi iwu
“Nke a bụ nnukwu ọrụ nke steeti na ndị nwere oke ikuku n’okpuru iduzi ICAO yana nkwado zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, ndụmọdụ ndị a, ntuziaka na ngwaọrụ ndị a bara uru naanị ma ọ bụrụ na a nabata ha niile. Ọ dị oke mkpa na ndị steeti mejuputa ntuziaka a, ọkachasị ka ha na-eme atụmatụ maka mmalite nke ụgbọ elu mba ofesi mgbe mba nwere ike imeghe. Dịka anyị kwuru ọtụtụ oge, ọ dị mfe imechi ụgbọelu na mkpebi onye ọ bụla. Ibidogharịa ma jigide arụmọrụ iji nyefee njikọta akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịme naanị ma ndị otu niile rụọ ọrụ ọnụ. Nkwado CART bụ ihe eji ewu ụlọ maka imekọ ihe ọnụ a, ”Alexandre de Juniac, Director General na CEO nke IATA kwuru.
Ngwa Ngwa Iji Mee Ihe
“Otu n’ime ndụmọdụ ndị kachasị mkpa sitere na ọrụ a bụ oku maka ndị nwe obodo iji hụ na CART na-ewepụta nsonaazụ na mkpebi mba. Anyị niile maara etu ụgbọ elu si dị mkpa na akụnụba. Na nkwekọrịta kwekọrịtara nke ụkpụrụ nduzi a bụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ laghachi ọrụ ha site na ịmegharị ụlọ ọrụ ahụ ọzọ. Dika ICAO na-esochi mmejuputa iwu, odikwa oke egwu ichoputa mmetụta nke ihe ohuru ohuru na COVID-19 gbasara usoro ihe egwu di egwu, karisia ka anyi na amuta otutu ihe banyere ogwu ogwu na ogwu.
Harmonizing Ule Asambodo
Ihe ndi choro maka asambodo ule COVID-19 zuru ụwa ọnụ gụnyere usoro teknụzụ maka iji mepụta nsụgharị dijitalụ na ntinye akwụkwọ nke ịgba ọgwụ mgbochi n'ọdịnihu. E tinyela ndụmọdụ ndị a na Akwụkwọ ntuziaka ICAO maka nyocha na usoro njikwa ihe egwu Cross-Border.
Site n'echiche nke ịkwadebe maka ụlọ ọrụ ịmalitegharị, nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị ịrịba ama nke CART. Uche ọha na eze gosiputara nke a site na ịkọ akụkọ nyocha IATA na nso nso a na 89% nke ndị zaghachiri kwenyere na gọọmentị ga-ahazi ịgba ọgwụ mgbochi na asambodo ule. Ọ ga - abụ ihe dị oke mkpa iji bulie elele nke IATA Travel Pass na teknụzụ ndị ọzọ etolitere iji jikwaa nzere njem dijitalụ.
Acgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Njem
CART kwadoro isi iwu abụọ gbasara ọgwụ mgbochi ọrịa nke ga-adị oke mkpa maka ịmaliteghachi nke ụgbọ elu mba:
Na-ebute ohere ịnweta ọgwụ mgbochi maka ikuku ikuku: Nkwado CART na-agbaso ntuziaka nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-enye usoro nke ihe ndị steeti kwesịrị ịtụle mgbe ha na-ekpebi otu dị iche iche ịgba ọgwụ mgbochi. Rewgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enyere aka mee ka ikuku ikuku "dị njikere iji fee" zuru ezu iji jigide usoro ịta ahụhụ dị oke mkpa, ọkachasị metụtara njem nke ọgwụ mgbochi na ọgwụ ndị ọzọ.
Vaccingba ọgwụ mgbochi ndị njem: CART akwadoro na ndị njem ekwesịghị ịgba ọgwụ mgbochi maka njem mba ụwa.
Ndị na-achịkwa nwere ihe ịma aka nke ijigide ọkwa nchekwa dị elu yana mbelata usoro nchịkwa zuru oke iji dozie maka ọnọdụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ nke etinyerela maka otu afọ ugbu a. Site na nkwado nke ụlọ ọrụ ahụ, ICAO ewerewo ọnọdụ iji dochie mmechi ndị dị ugbu a site na omume a kapịrị ọnụ. Ọ na-akwado nke a site na sistemụ a ewepụtara (TE) nyere aka mee ka steeti nwee ike biputere ma nweta ndekọ nke omume emere iji jigide izi ezi nke asambodo ha, ikikere ha, yana nnabata ndị ọzọ n'oge ọrịa COVID-19.
IMEX America laghachi maka azụmaahịa